အကောင်းဆုံး Resveratrol အမှုန့် (501-36-0) ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Resveratrol အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Resveratrol အမှုန့် (501-36-0) ဗီဒီယို
Resveratrol အမှုန့် Specifications
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 228.24 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 261 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 263
ဓာတုအမည်: (င) -5- (4-hydroxystyryl) benzene-1,3-diol
နာမ်: trans-Resveratrol; SRT501; SRT-501; SRT 501; RM1812; RM-1812; RM 1812; CA1201; , CA-1201; , CA 1201; Resvida; Vineatrol 20 မီလီမီတာ။
InChI Key ကို: LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
ဘဝတစ်ဝက်: 1-3 နာရီ
လျှောက်လွှာ: Resveratrol သည် ၀ ိုင်နီ၊ စပျစ်သီးအနီအနီများ၊ ခရမ်းရောင်စပျစ်သီးဖျော်ရည်၊ ပိုးစာနှင့်မြေပဲအနည်းငယ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒါဟာဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Resveratrol သည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောကိုလက်စထရော၊ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်အခြားအခြေအနေများစွာအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: Light ကအဝါရောင်အမှုန့်
Resveratrol (501-36-0) ကဘာလဲ?
Resveratrol (SRT-501 ဟုလည်းလူသိများသည်) သည်စပျစ်သီးနှင့်အခြားအစားအစာထုတ်ကုန်များမှထုတ်လုပ်ထားသော phytoalexin ဖြစ်သည်။ Resveratrol သည်အဆင့် -၂ မူးယစ်ဆေးဖြစ်သည့်အင်ဇိုင်းများ (anti- စတင်လှုပ်ရှားမှု) ကိုသွေးဆောင်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးပြီး cyclooxygenase နှင့် hydroperoxidase လုပ်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးသည်။ နှင့် promyelocytic သွေးကင်ဆာဆဲလ်ကွဲပြားခြားနားမှု (Anti- တိုးတက်မှုလှုပ်ရှားမှု), အားဖြင့် carcinogenesis ၏အဓိကခြေလှမ်းသုံးခုအတွက်လှုပ်ရှားမှုများပြ။ ဤသည်အေးဂျင့်တစ် ဦး ထိုးနှင့်အချိန် - မှီခိုထုံးစံ၌ TNF- သွေးဆောင် NF-kappaB ၏ activation တားစီးလိမ့်မည်။
Resveratrol (501-36-0) အကျိုးခံစားခွင့်များ
နှလုံးနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်သွေးခဲများကိုကာကွယ်ခြင်းစသည့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည့် Resveratrol ကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ resveratrol ကို antioxidant လို့ခေါ်တယ်၊ များသောအားဖြင့်ကင်ဆာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ရာထူးတိုးပေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ resveratrol သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွင် ဦး နှောက်ပုံစံအဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ Resveratrol သည်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။
Resveratrol (၅၀၁-၃၆-၀) လှုပ်ရှားမှုယန္တရား?
Resveratrol သည်ဆဲလ်တစ်ခု၏ DNA ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Antioxidants သည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များကြောင့်ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်ပစ္စည်းများသည်ညစ်ညမ်းမှု၊ နေရောင်ခြည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအားအဆီဓာတ်များလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမတည်ငြိမ်သောအက်တမ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကင်ဆာ၊ အိုမင်းခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ယိုယွင်းခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
Resveratrol အမှုန့် (501-36-0) လြှောကျလှာ
Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) သည်အနီရောင်အသားအရေ၊ ဂျပန် knotweed (polygonum cuspidatum)၊ မြေပဲ၊ blueberries နှင့်အခြားသီးများတွင်တွေ့ရသောသဘာဝဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိစီးမှုများမှကာကွယ်ရန်အပင်အချို့မှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအားမြင့်ဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Antioxidants သည်အိုမင်းရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဟုယုံကြည်ရသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုပျက်စေသည်။ ဂျပန် knotweed သည်အမြင့်ဆုံး resveratrol ပါ ၀ င်သည့်အပင်ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
Resveratrol အမှုန့် ရောင်းမည်(Resveratrol အမှုန့်ကိုအများအားဖြင့်ဝယ်ယူရန်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Resveratrol အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ ဖြစ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
Turan B, Tuncay အီး, Vassort G. အ Resveratrol နှင့်ဆီးချိုရောဂါ၏နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက်: မကြာသေးမီကစသည်တို့နှင့် vivo လေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ J ကို Bioenerg Biomembr ။ 2012 ခုနှစ်Aprပြီ; 44 (2): 281-96 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 22437738 ။
Whitlock NC, Baek SJ ။ resveratrol ၏ anticancer သက်ရောက်မှု: ကူးယူအချက်များ၏မော်ဂျူ။ Nutr ကင်ဆာ။ 2012; 64 (4): 493-502 ။ Epub 2012 ခုနှစ်Aprပြီ6ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 22482424; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3349800 ။
Juan ME၊ Alfaras ၁၊ Planas JM ။ Trans- resveratrol အားဖြင့်အူမကြီးကင်ဆာ chemoprevention ။ Pharmacol Res ။ 2012 ခုနှစ်ဇွန်; 65 (6): 584-91 ။ Epub 2012 မတ်လ 28 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 22465196 ။